Abavelisi beeTafile eziSebenzayo kunye nabaXhasi - China iTheyibhile yokuSebenza yeeTafile
I-TY ye-Stainless Hydraulic Manual yoPhando lweGumbi lokuSebenza
Itafile yokusebenza ye-TY yesikhokelo ilungele utyando lwe-thoracic kunye nesisu, i-ENT, i-obstetrics kunye ne-gynecology, urology kunye ne-orthopedics, njl.
Isakhelo, ikholamu kunye nesiseko yintsimbi engenasici, kulula ukuyicoca kunye nokubola.
I-TS-1 ye-Stainless Mechanical Hydraulic Operating Table yokuSebenza ngokubanzi
I-TS-1 itafile yokusebenza ngomatshini yenziwe ngentsimbi engenasici, enamandla amakhulu oomatshini, ukumelana nokubola kunye nokucoca ngokulula.
Itheyibhile yokuSebenza ngokuSebenza ngeHydraulic yoSibhedlele
Itafile yotyando lwe-hydraulic ye-hydraulic ilungele utyando lwe-thoracic kunye nesisu, i-ENT, i-obstetrics kunye ne-gynecology, i-urology kunye ne-orthopedics, njl.
I-TDY-2 Insimbi engenasiphelo yoMbane yokuSebenza ngeThebhile yoNyango ngokuSebenza ngokubanzi
Itheyibhile yokusebenza ye-TDY-2 yeselfowuni ineebhedi ezingama-304 ezingenazintsimbi kunye nekholamu, kulula ukuyicoca kunye nokuchasana nongcoliseko.
Umphezulu wetheyibhile wohluleke waba ziinxalenye ezi-5: icandelo lentloko, icandelo elingasemva, icandelo leempundu, kunye namacandelo amabini emilenze anokufunyanwa.
I-TDG-1 ye-Godd yoMgangatho oSebenzayo kwiTafile yokuSebenza kombane kunye nezatifikethi ze-CE
I-TDG-1 Itafile yokusebenza yombane inamaqela amahlanu ezinto ezenziwayo: umbane uhlengahlengisa indawo yokuphakama kombhede, ukujikisa phambili nokubuyela umva, ukuthambeka ngasekhohlo nangasekunene, ukuphakama kweplate yangasemva, kunye nokuqhekeza.
I-TDY-Y-2 Isibhedlele sezixhobo zoNyango lwe-Electro-Hydraulic Operating Table
Le tafile yokusebenza kwe-electro-hydraulic yahlulwe yangamacandelo ama-5: icandelo lentloko, icandelo langasemva, icandelo leempundu, amacandelo amabini omlenze ohlukanisiweyo.
Ukuhanjiswa okuphezulu kwezinto zefayibha kunye ne-340mm ethe tyaba ekutyibilikeni akuqinisekisi ndawo yokungaboni ngexesha lokuskena kwe-X-ray.
I-TDY-Y-1 Itheyibhile yokuSebenza ngombane ye-Hydraulic e-China
I-TDY-Y-1 itafile esebenza ngombane ngesanti kubunzulu baphantsi isebenzisa ubume bokudlulisa umbane ovela ngaphandle, obuyisela endaweni iteknoloji yokuhambisa umbane wentonga yombane.
Uhlengahlengiso lwesikhundla luchaneke ngakumbi, isantya sokuhamba silingana ngakumbi kwaye sizinzile, kwaye intsebenzo ithembekile kwaye yomelele.
I-TDY-G-1 I-Radiolucent engenaNtsimbi ye-Electric-Hydraulic OKANYE Itafile ze-Neurosurgery
I-TDY-G-1 i-electro-hydraulic itafile yokusebenza edibeneyo, ene-ultra-low position, ingakumbi efanelekileyo yokuhlinzwa kwengqondo. Kufanelekile ukuba uqhaqho esiswini, zokubelekisa, yamanina, ENT, womchamo, anorectal kunye nezinye iintlobo ezininzi zotyando.